Ingiriiska oo si rasmi ah uga baxay Midowga Yurub | Berberanews.com
Home WARARKA Ingiriiska oo si rasmi ah uga baxay Midowga Yurub
Ingiriiska ayaa caawa saqdii dhexe markii saacaddu gaadhay 12 habeenimo oo gaw ah si rasmi ah uga baxay Midowga Yurub oo uu muddo 47 sanadood ah ka tirsanaa.
Xarunta baarlamanka ee dalkaas ee magaalada London, ayaa waxa fagaaraha ku yaal ka buuxay dad badan oo taageersanaa in laga baxo midowgaa, waxaanay tirinayeyeen ilbidhiqsiyada ka hadhay wakhtiga oo markii ay saacaddu 12 habeenimo gaadhay damaashaad ballaadhan dhigay.
Hase yeeshee Ingiriisku waxa uu inta sannadkan ka hadhsan ku sii dhaqmi doonaa heshiiskii Midowga Yurub, waana muddo loo qoondeeyey in lagu galo wada xaajoodyo lagu gorfaynayo sida uu noqon doono xidhiidhka mustaqbalka ee dalkaas iyo Midowga Yurub.
Hadaba Ingiriiskii ka bax Midowgii Yurub e sidee wax isku bedelayaan.
Ingiriisku ka qayb gali maayo shirarka Midowga Yurub.
Laga billaaboi sabtida soo socota, ra’iisul wasaaraha Britain, Boris Johnson, wuxuu noqonayaa qof si gaar ah loogu casuumi doona oo keliya shirka EU.
Sidoo kale wasiirada Britain iyaguna kama qeybgeli doonaan shirarka caadiga ah ee Midowga Yurub ay kaga arrinsaneyso arrimo badan.
Dadkii taageersanaa ka bixitaanka Yurub ayaa ku doodaya in ay helin doonaa xoriyad ay dal walba kula ganacsan karaan, taasina ay sare u qaadi doonta dhaqaalaha UK.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ay labad dhinac ka wada hadli doonaan, waxaana ugu muhiimsan heshiis ganacsi oo labada dhinac ay ku heshiiyaan.
Heshiis kasta poo ganacsi oo dhexmara UK iyo dalalka kale ee Midowga Yurub, waxay dhaqan gali doonaan ka dib xilliga kala guurka.
Midabka baasaboorka oo la bedeli doono
Midabka baasaboorka dalka UK ayaa markale la badeli doonaa, waxaana dib loo soo celin doonaa midabkii hore ee buluuga.
Mar uu ka dhawaaqay isbadelka, sannadkii 2017-kii, wasirkii socdaalka ee xiligaas, Brandon Lewis, ayaa aad u bogaadiyay dib usoo celinta baasaboorkii hore.
Baasaboorka cusub ee la bixin doono ayaa la sheegay in uu noqon doono midka cusub, halka kuwa hadda jirana ay sii shaqeyn doonaan.
Wasaaraddii Brexit oo la baabiin doono
Kooxdii ka shaqeysa ka bixtaanka Britain ee Midowga Yurub ayaa la kala diri doonaa, halka kuwa kale oo gacanta ku hayay xallinta khilaafaadka, haddii aanan la heshiinin lahayan, la kala diri doono marka Britain ay ka baxdo Midowga Yurub.
Jarmalka dembiileyaasha Ingiriisku doonayo u dhiibi maayo.
Suurtagal ma noqon doonto in dadka lagu tuhmo dembiyada dib loogu soo celiyo Britain, haddii ay u baxsadaan dalka Jarmalka.
Dastuurka dalka Jarmalka wuxuu dhigayaa in muwaadiniinta u dhalatay dalkaas aanan loo gacan gelinin dal kale, haddii dalkaas uusan ahayn mid ka tirsan Midowga Yurub.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee UK waxay sheegtay in sharcigaas uu shaqeyn doono inta lagu guda jiro xilliga kala guurka, waxayna taas ka dhigan tahay in Jarmalka uu Britain u gacan gelin doono dadka ay doonayaan.
Maxaa sidii hore u sii shaqayn doona
Maadaama xilliga kala guurka uu bilaabanayo maanta oo bisha Feeberweri kow tahay, inta badan waxyaabaha ka dhaxeeya labada dhinac ayaa sii ahaan doono sidii hore.
Socdaalka dhanka badda ama diyaaradaha iyo tareenada ayaa sii socon doona.
Muwaadiniinta u dhashay dalka UK ayaa wali sii adeegsan kara baasaboorkooda xilliyada ay u safrayaan dalalka Midowga Yurub, waxaana loo tixgelin doonaa si lamid ah sidii hore.
Shatiga socdaalka iyo lahaanshaha hantida
Shatiga kaxeynta baabuurta ee UK wuxuu ahaan doonaa sidiisa, waxaana sidaas oo kale u shaqeyn doona warqadda aqoonsiga xoolaha nool ee ay dadka xananaeystaan oo ay la safraan sida eyda oo kale.
Kaararka ceymiska caafimaadka ee ay bixiso Dowladda Britain ayaa wali sii shaqeyn doona, dadkuna ay isku daweyn doonaan haddii ay xanuunsadaan.
Kaararkan waxaa lagu isticmali karaa dal walba oo katirsan EU iyo kuwa aan katirsaneyn ee kala ah Switzerland, Norway, Iceland iyo Liechtenstein
In qofku ka shaqeysto kuna noolaado dalalka Midowga Yurub
Xorriyadda socdaalka ayaa sideeda sii ahaan doonto inta lagu guda jiro xilliga kala guurka ama kumeel gaarka. Muwaadiniinta u dhashay Britain ayaa ka shaqeysan kara, kuna noolaan kara dalalka Midowga Yurub.
Sidaas si lamid ah ah, muwaadiniinta dalalka Midowga Yurub ayaa iyaguna ka shaqeyn kara, kuna noolaan kara Britain.
Muwaadiniinta Ingiriiska ee ku nool dalalka Yurub ayaa heli doona lacagaha hawlgabka ee ay siiso dowladda meelwalba oo ay joogaan. Dadkan ayaa sidoo kale waxay heli doonaan lacagaha sannadwalba lagu daro dhaqaalaha la siiyo.
Previous articleMaayarka Laascaanood:-WarbixinSanadeedkiisii oo Iftiimiyay Waxqabadkii Sadex Sanno
Next articleMadaxweynaha turkiga oo weedho culus ku duray hoggaamiyayasha Islaamka ee daba-dhilifka u ah reer Galbeedka